Salama daholo, eto izahay miaraka amin'ny fampiharana Android mahasoa hafa fantatra amin'ny anarana hoe EHTERAZ Apk. Izany dia hanampy anao sy ny fianakavianao ho tafavoaka velona amin'ity toe-javatra misy ny valan'aretina-19 ity. Manolotra anao endri-javatra maro izy io, izay ahafahanao miady amin'ny areti-mifindra.
Io no hany fampiharana Android, izay novolavolain'ny governemanta manokana mba hisorohana ny tranga. Hahita rindranasa maro hafa toa an'ity ianao, fa io no fampiharana ofisialy. Raha te-hahafantatra bebe kokoa momba ity fampiharana ity ianao dia mijanòna miaraka aminay dia hozarainay izay rehetra fantatray momba izany.
Topimaso momba ny EHTERAZ Apk
Izy io dia fampiharana Android, izay natao manokana hisorohana ny fihanaky ny areti-mifindra. Izy io dia novolavolain'ny Minisiteran'i Qatar ho an'ny mponina ao Qatar ihany. Mivoatra amin’ny fiteny maro izy io, ka mora azon’ny olona.
Noho izany ny fampiasana azy dia tsy olana ho an'iza na iza. Ny olana fotsiny dia ho an'ny mponin'i Qatar ihany izany, izay midika fa tsy misy olon-kafa afaka mahazo ny serivisy. Misy serivisy telo lehibe natolotr'ity fampiharana ity ho an'ny rehetra, hizara an-tsipiriany izany izahay.
Ny serivisy voalohany atolony dia ny vaovao farany momba ny aretina. Ny vaovao tany am-boalohany ihany no hamoaka azy, tsy misy vaovao sandoka sy ny toy izany. Hizara izay vaovao ahafahanao mamonjy ny tenanao sy ny olon-tianao izy io.
Ny serivisy faharoa atolotray azy dia ny fahazoanao ny fepetra fiarovana rehetra ilaina sy ny torolàlana momba ny fanairana avy amin'ny governemanta. Tsy maintsy mandray ireo dingana fiarovana ianao mba hiarovana ny tenanao sy ny fianakavianao.
Ny tena manan-danja indrindra dia ny ahafahanao manamarina ny antsipiriany momba ny toerana rehetra. Hanome anao ny isan'ny olona voasedra sy manana tranga tsara, karantina, ratsy ary ahiahiana mbola tsy voasedra.
Developer Ministeran'ny atitany - Qatar
Anaran'ny fonosana com.moi.covid19
Ilaina ny fanampiana kely indrindra 4.1 +
Endri-javatra lehibe an'ny EHTERAZ Apk
Araka ny fantatra dia fotoan-tsarotra tokoa ho antsika rehetra izao, saingy tokana ihany ny fomba hiadiana amin’izany dia ny fampiharana ny fepetra rehetra ilaina. Io no hany fampiharana Android manolotra izany rehetra izany, noho izany dia misy endri-javatra maro amin'ity EHTHERAZ ity.
Hozaraiko aminareo ny sasany amin'izy ireo raha heverinareo fa mety tsy holazaiko ny iray amin'ireo zava-dehibe. Azonao atao ny mizara azy ireo amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany. Aza misalasala mampiasa azy.
Ahoana ny fampiasana EHTERAZ?
Aorian'ny fametrahana azy dia mila manokatra azy ianao ary manaiky ireo fepetra sy fepetra, fa alohan'ny hanaovanao izany dia ovao ny fiteny ary vakioo ihany ireo fepetra sy fepetra ireo. Aorian'izany dia tsy maintsy mamela ny toerana misy anao avy amin'ny toe-javatra hitohy foana ianao ho an'ny fampiharana.
Ankehitriny dia mila mamita ny fizotry ny fisoratana anarana fotsiny ianao. Zavatra telo ihany no ilainao hanoratana ny tenanao amin'ity fampiharana ity. Ny voalohany dia ny nomeraon-telefaonao, ny faharoa dia ny QID ary ny farany dia ny daty fahataperan'i QID anao.
Handray ny OTP ianao ao anatin'ny minitra vitsivitsy ary mila miditra ianao. Ny zavatra farany tokony hataonao dia ny miditra amin'ny toe-pahasalamanao satria misy safidy isan-karazany.
Ahoana ny fampidinana EHTERAZ?
Raha te-hisintona ETHERAZ Apk dia mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao eo amin'ilay pejy izay hita eo an-tampon'ny sy eo ambanin'ity pejy ity. Mila mitendry ilay bokotra fotsiny ianao ary miandry segondra vitsy mandra-pahatapitry ny fisintomana.
EHTERAZ Apk no fampiharana Android tsara indrindra, izay fomba tsara indrindra hisorohana ny fihanaky ny valan'aretina-19. Afaka mamonjy ny fianakavianao sy ny hafa koa ianao. Mijanòna ao an-trano Mijanona ho azo antoka, tsidiho hatrany ny anay tranonkala.
Sokajy Apps, Fahasalamana & Fitness Tags EHTERAZ, EHTERAZ Apk, App EHTERAZ Post Fikarohana